Xisbiyada Somaliland Oo Ku Kala Aragti Duwanaaday Kulanka Maanta Jabuuti Ku Dhex Maraya Biixi iyo Farmaajo - Jigjiga Online
HomeSomalidaXisbiyada Somaliland Oo Ku Kala Aragti Duwanaaday Kulanka Maanta Jabuuti Ku Dhex Maraya Biixi iyo Farmaajo
14/06/2020 Mohamed Mohamoud
Jabuuti (JO)- Kulan heer sare ah ayaa la filayaa in uu maanta Oo Axad ah uga furmo Jamhuuriyadda Djibouti wufuud heer sare ah oo ka socda Somaliland iyo Soomaaliya oo wada xoojoodkoodii waayadan ba la hadal hayey uu kulan hor dhac u ahi ka furmayo dalkaas.
Xogo lagu kalsoonyahay oo ay BBC-du heshay ayaa xaqiijiyey in labada xisbi ee mucaaradka ahi ku kala aragti duwanaadeen warkaa madaxweynuhu siiyey.
Cabdirisaaq Khaliif waxa kale oo uu sheegay in aanu xisbigiisa ka codsanin in xubno ka tirsani raacaan iyaguna aanay ka codsanin. Waxase uu xaqiijiyey in berito ay bixi doonaan weftiga madaxweynaha Somaliland oo ay ka mid yihiin Gudoomiyaha Golaha Guurtida, Wasiirka Arimaha Dibadda, Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga, Wasiirka Ganacsiga iyo Edna Aadan Ismaaciil oo wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan xukuumadda.
“Aniga jeermaan ahaan mawqifkaygu waxa weeyi horena waan uga soo horjeeday horena waan u sheegay in aan kulankaasi aanu maanta meesha qaban, wakhtigeediina aanu ahayn. Dawladda Soomaaliya ee maanta lala kulmayaana aanay ahayn dawlad mutaysatay in lala kulmo ayaan u arkaa, markaa guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan hase ahaatee dawladda hadda joogta ood ogtahay dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyadii ay ka baxeen, iyo kii u dambeeyey ee ninkaa arimaha dibada u qaabilsan wixii uu ku hadlayey in la horfadhiistaa waxaan u aragnaa in ay tahay guul darro ku timi Somaliland.” Ayuu yidhi Faysal Cali waraabi oo muujinayey sida ay uga soo horjeedaan in Somaliland shirkaa ka qayb gasho.
Xogo kale oo aanu ka hellay dhinac xukuumadda Soomaaliya, ayaa iyaguna noo xaqiijiyey in qorshuhu yahay in Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo u duulo magaalada Djiobouti maalinta berri ah.
Waxay xogaha aanu dhankaa ka hellay intaa ku dareen in madaxweynaha wafitigiisa ay ka mid noqon doonaan Ra’isal Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamanka.
Guddiga Somaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliya ayaa hore u sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadallada laakiin ay marka hore dowladda federaalka ka doonayaan inay meelmariso heshiisyadii horay loogu gaaray kulamadii ay labada dhinac yeesheen.
Wada xaajoodkan haatan ka bilaabi doona Djibouti ee ay berri u ambabixi doonaan labada wefti, waxa wararku tibaaxayaan in uu ka soo shaqeeyey danjiraha Maraykanka Soomaaliya u fadhiya. Sidoo kale waxa ku wehelin doona Madaxwene Geellaha gogosha fidiyey Ra’isal Wasaarahah Itoobiya iyo diblomaasiyiin ka socda IGAD iyo Midowga Yurub.
Ilaa haatan labada dhinac midkoodna kama soo saarin war faahfaahsan oo ku saabsan arimaha lagu gorfayn doono, hase yeeshee dadka arimaha siyaasadda Soomaalida falanqeeyaa waxay sheegayaan in aan la saadaalin karin in wax weyni ka soo bixi doonaan.